पुस्तक बार्ता :उत्शब पोख्रेल - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
पुस्तक बार्ता :उत्शब पोख्रेल
-- पुस्तक वार्ता नाेभेम्बर अंक, नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : सोमवार, मंसिर २२, २०७७
१. तपाईँ अहिले कुन पुस्तक पढदै हुनुहुन्छ ?
म अहिले बिसौं शताब्दिका प्रख्यात साहित्यकार हर्मन हेस्सेले लेख्नुभएको नोबेल ‘सिद्धार्थ’ पढिरहेको छु ।
२. पुस्तक किन पढनुहुन्छ ?
म सुरुसुरुमा रमाइलोको लागि पढ्थें बिशेष गरि उपन्यासहरु । पछि पछि ज्ञानको लागि पढ्न सुरु गरें । पुस्तक यस्तो चिज हो जसले हामीलाई हाम्रो यथार्थ झल्काउने संगै हामीलाई जीन्दगीमा धेरै पाठहरु सिकाउँछन् । हाम्रा कमि कम्जोरीहरु नि औलाउँछन् । सबैभन्दा राम्रो कुरा हामी पुस्तक संग बादबिबाद नि गर्न सक्दैनाैं अनि आफ्नो कमि कम्जोरीहरु स्वीकार्दै अगाडि बढ्न बाध्य हुन्छौं । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा चै हामी कुन पुस्तक पढ्दै छौं भन्ने हो । पुस्तकको हाम्रो मन–मस्तिष्कमा गहिरो असर पर्ने हुन्छ । त्यहि भएर कुन र कस्तो बिषयबस्तु भाको पुस्तक पढ्ने भन्ने कुरा सोचेर मात्र पढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
३. पुस्तक पढने बानी कसरी बस्न गयो ?
सायद त्यस्तै ९ कक्षामा पढ्दा बेला एकजना साथीले विसेश्वर प्रसाद कोइरालाको ‘सुम्निमा’ र ‘हिटलर र यहुदी’ पुस्तक पढ्न दियो । दुइटा फरक बिदाका पुस्तकहरु तर दुवै मलाई यति मन पर्यो कि उनका भेटेजति सबै किताबहरु खोजि खोजि पढ्न थालें । बिस्तारै शंकर लामिछाने, पारिजात अनि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यका पुस्तकहरु पढ्न थाले । यत्तिकैमा पुस्तकहरु प्रति थाहै नपाइकन मोह बसिसकेछ ।
४. मन परेका पुस्तक र मन पर्ने लेखक ?
मन पर्ने पुस्तक र लेखकमा बिसेश्वर प्रसाद कोइरालाको सुम्निमा, पारिजातको शिरिसको फूल, शंकर लामिछानेको एब्सट्रयाक चिन्तन प्याज, हर्मन हेस्सेको सिद्धार्थ, पाउलो कोहेलाको द अल्केमिस्ट, नेपोलियन हिलको थिङ्क एंड ग्रो रिच, चाड हाईमसको डुईङ्ग ह्वाट मस्ट बि डन हुन् । सबैभन्दा मन परेको लेखक चाहिँ बिसेश्वर प्रसाद कोइराला नै हुन् ।
५. दोहोर्याएर पढेको कुनै पुस्तक ?
सिद्धार्थ, द अल्केमिस्ट, थिङ्क एंड ग्रो रिच आदि
६. पुस्तकमा महिनामा कति खर्च गर्नुहुन्छ ? अथवा पुस्तक कत्तिको किन्नुहुन्छ ? साथीहरुसँग चाँहि कत्तिको आदान प्रदान गर्नुहुन्छ ?
औषतमा महिनाको १०० देखि २०० डलरसम्म खर्च हुन्छ होला । मलाई खासै मागेर पढ्न मन लाग्दैन । आफूलाई मन परेको पुस्तक किनेर नै पद्छु ।.
७. कस्ता खालका पुस्तक बढी पढ्न रूचाउनुहुन्छ ?
आजकल म प्रायः आध्यात्म, बायोग्राफी, सेल्फ–हेल्प, जीवन संघर्ष आदि प्रकारका पुस्तकहरु पढ्ने गर्दछु । यसले जीन्दगीका धेरै प्रश्नहरुको उत्तर दिन्छन् ।
८. बिशेषगरी कुन समयमा पुस्तक पढ्नुहुन्छ ?
कुनै खास समय भन्ने छैन । बिहानै होस् या कामको बीच–बीचमा अनि प्रायः सुत्नु भन्दा अगाडि पढ्ने गर्दछु ।
९. पुस्तक के गरीरकसरी छनोट गर्नुहुन्छ ?
केहि आफूलाई मन परेका पुस्तक प्रेमी ब्यक्तित्वहरु लाई फलो गरेको छु सोसिअल मिडियामा । प्रायः जसो पुस्तकहरु वहाँहरुकै रिभ्यु अनुसार पढ्द्छु । मुख्यतया आफूलाई रुचि भएको बिषय सम्बन्धि हुनुपर्यो । जस्तै भर्खरै एउटा पुस्तक जय शेट्टीको ‘थिन्क लायक अ मन्क’ किनेर पढें । उसलाई मैले धेरै अघिदेखि फलो गर्थें अनि उसको भिडियोहरु हेरिरहेको हुन्थें । यसैले उसको पुस्तक बजारमा आउनुभन्दा अगाडि नै अग्रिम अडर गरेर किने ।
१०. मन परेको र सधैं सम्झिरहने र आँफूलाई प्रभाव पारेको कुनै पुस्तकको कुनै हरफ र अंश ?
थिङ्क एण्ड ग्रो रिच पुस्तकबाट एउटा हरफ म संधै सम्झिरहन्छु । “हरेक कठिनाई, असफलता, हरेक दुःखका क्षणहरुले उत्तिकै अवसरहरु पनि बोकेका हुन्छन् ।”
त्यस्तै, द अल्केमिस्टबाट एउटा हरफस “जब तिमी केहि (मन बाट) चाहान्छौ, सारा ब्रम्हाण्ड तिमीलाई सहयोग गर्न षड्यन्त्र गर्नेछ ।”
११. जीवनमा प्रभाव पारेको कुनै पुस्तक र किताबी पात्र छन् ? पुस्तक तथा पात्रको नाम र प्रभाव पार्नाको कारण ?
मलाई प्रभाव पारेका पुस्तक त धेरै छन् । तर पात्र चै सिद्धार्थ नै हो । प्रभाव पार्नुको कारण चै उसको सिद्धान्त हो । “ज्ञान आफै भित्रबाट प्राप्ती हुन्छ – ज्ञान तथा बुद्ध्त्व न त गुरुहरुबाट न त सांसारिक बस्तुहरुबाट नै प्राप्त हुन्छ । यो हरेक उमेर तथा हरेक पलहरुमा उपलब्ध छ । सही अर्थमा ज्ञान स्थिरता, करुना, साथै आफू वरिपरिका हरेक चिजहरुलाई आफु जत्तिकै महत्व दिएर उनिहरुलाई बुझ्न सक्नुलाई नै भनिन्छ ।”
१२. पढ्न चाहेर पनि नपाउनुभएको कुनै पुस्तक छ ? पुस्तकको नाम ?
“The Power of Now : A Guide to Spiritual Enlightment”
१३. मन नपरेर पढ्दापढ्दै बीचैमा छाडेको कुनै पुस्तक छ ? पुस्तकको नाम र मन नपर्नाको कारण ?
“लोलिता” भन्ने पुस्तकको बारेमा मेरो एउटा साथीले धेरै कुरा गर्यो । त्यस्तै २०/२१ बर्षको थिए होला । सुरुमा त ठिकै लाग्दै थियो तर पढ्दै जाँदा कहाँनी धेरै नै डार्क लाग्दै गयो अनि पढ्न नसकेर बीचैमा छाडिदिएँ । मलाई पुस्तकहरु प्रायः सकारात्मक मेसेज दिने खाल्का मन पर्छन् ।
१४.अरूलाई कुन पुस्तक पढ्न सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ ?
जिन्दगीमा सफल हुनकालागि The Go Giver by Bob Burg, Think and Grow Rick by Napolean Hill, Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey पुस्तकहरु निकै उपयोगी छन् । त्यस्तै पढ्दा रमाइलो साथै सन्देशमूलक पुस्तक हरुमा The Alchemist by Paulo Cohelo, Siddhartha by Herman Hesse उपयोगी छन् ।
भेटिन्न झैँ डाक्टर !
सम्झनामा राष्ट्र निर्माता